Amaphutha Amahlanu Abucayi Uhlelo Lakho Lokumaketha Nge-imeyili Kufanele Lugweme | Martech Zone
Ngaphezulu Abasebenzisi abayizigidi ezingu-222 e-US kuphela, i-imeyili inamandla amakhulu njengesikhulumi sokumaketha. I-imeyili iyithuluzi eliguquguqukayo elingasetshenziselwa ukufudumeza imikhondo ebandayo, ukuxhumana namakhasimende akhona kanye nokufinyelela kumathemba okuqhuba ukuthuthukiswa kwebhizinisi elisha.
Ochwepheshe bezokumaketha nge-imeyili baqonda izisekelo, njengokuqamba ukwenza umugqa wezihloko onamandla futhi kufaka phakathi ukubizelwa esenzweni okuqinile. Kepha nabathengisi be-imeyili abangomakadebona bangawela ogibeni lokusebenzisa amasu angasebenzi noma amasu wokuthengisa we-imeyili angalimaza umkhiqizo wabo. Nawa amaphutha amakhulu ama-imeyili abathengisi be-imeyili abawenzayo - nokuthi ungabagwema kanjani.
Ukusebenzisa a uhlu lwamakheli we-imeyili olubi. Noma ngabe kuthengiwe noma kuhlanganiswe ngokuhamba kwesikhathi ngaphakathi, uhlu olubi lwe-imeyili lungapela inkinga. Izinhlelo ezenzelwe ukumelana nogaxekile zibheka ukusetshenziswa kwamakheli e-imeyili angasebenzi, ngakho-ke amakheli amaningi aphelelwe yisikhathi angathola ama-imeyili enkampani yakho abanjwe ogibeni logaxekile. Zijwayeze ukuhlanzeka kwedatha okuhle ukuze uqiniseke ukuthi lokhu akwenzeki kuwe.
Ukungasebenzisi umklamo ophendulayo. Cishe ama-imeyili angama-50% manje avuliwe kudivayisi ephathekayo, ngakho-ke uma ungasebenzisi idizayini ephendulayo - indinganiso yokuklama elungiselela okuqukethwe kwesikrini sedivayisi - uhhafu wabamukeli bakho ngeke bakwazi ukubuka i-imeyili yakho ngaphandle kokusondeza okuqukethwe nokuskrola kusuka kolunye uhlangothi. Iningi lizofaka umyalezo wakho esikhundleni salokho.
Ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana zamakhasimende zemikhankaso ye-imeyili. Abanye abadayisi be-imeyili bathenga izinhlu futhi bazilayishe ezinkundleni zokuxhumana ezifana ne-Mailchimp noma i-ConstantContact, ezingakhelwanga le njongo. Eqinisweni, kwephula imigomo yesevisi futhi kungenza i-akhawunti yakho ivalwe futhi isizinda sakho sivinjelwe. Sebenzisa a ithuluzi lesizukulwane sokuhola like Abathengisi Esikhundleni.
Ukuthenga uhlu lwentengo enhle kakhulu yokwenza iqiniso. Njengakwezinye izindawo eziningi zokuphila, uthola okukhokhelayo, ngakho-ke thenga uhlu lwakho lwe-imeyili emthonjeni onedumela elihle. Uma ukhetha eyodwa kwiDVD nge $ 100, ngokuqinisekile izobe iqukethe amakheli we-imeyili afile, angathola ukuthi isizinda sakho sivalwe ohlwini. Uhlu oluhlanzekile lubiza imali ngoba kuthatha utshalomali ukuqoqa kahle, ukukhuhla nokugcina imininingwane.
Ukuhluleka khomba abamukeli be-imeyili. Umkhankaso we-imeyili osebenzayo uletha umyalezo ofanele kumamukeli ofanele. Qiniseka ukuthi uhlu lwakho lwe-imeyili lubhekiswe kubuntu ozama ukufinyelela kubo. A fafaza uthandaze ndlela kungabonakala njengokudlala amaphesenti, kepha empeleni kukhona izindleko eziphakeme kakhulu zokuthumela i-imeyili, ngakho-ke ukubhekisisa ngokucophelela kuyisihluthulelo sempumelelo.
Kunezinto eziningi ezingena emkhankasweni omkhulu we-imeyili. Ukunikezwa kusobala ukuthi kuyinto ebalulekile. Kanjalo nemilayezo - kusuka kulayini wesihloko kuya ocingweni lokuvala kuya esenzweni. Kepha kuthatha okungaphezulu kakhulu komkhiqizo okhangayo noma ukunikezwa kwensizakalo nekhophi elisebenzayo ukudala umkhankaso wokuwina. Idizayini ye-imeyili nemodi yokulethwa kunemiphumela emihle futhi.
Futhi idatha esesikhathini - amakheli afanele e-imeyili kanye nemininingwane efanele yokukhomba - nayo ibalulekile. Ekuthengiseni, kumayelana nokuthola umlayezo ofanele kumuntu ofanele ngesikhathi esifanele. Lesi simiso sisebenza nakwezentengiso ze-imeyili. Uma ungagwema lawa maphutha wokuthengisa ama-imeyili amahlanu, uzobe usendleleni eya empumelelweni.
Tags: amakheli e-imeyili amabiukuthenga uhlu lwama-imeyiliamaphutha we-imeyili abucayiimeyili ukumaketha amaphuthaamapulatifomu e-imeyiliumklamo ophendulayoukwahlukanisaukukhomba
Ividiyo: UKevin Spacey uxoxa ngezinto ezintathu zokuxoxa izindaba